Akunjalo. UThixo uYise uthathwa njengowona kuphela umthandazo onokuqwalaselwa ngawo. Kuqondwa ngakumbi ukuba uKrestu umi kwindawo yokudibanisa phakathi kukaThixo nomntu (Hebhere 7: 25). Yonke imithandazo yenziwa ngoKristu, okanye egameni likaKristu (John 16: 23-26).
Kulindeleke ukuba ngalinye ilungu lecawa lidibanise unqulo ngosuku lweNkosi. Inxalenye ebalulekileyo yokunqula kukutya kwesidlo seNkosi (IZenzo 20: 7). Ngaphandle kokuba kuphawulwe ngokufanelekileyo, ilungu ngalinye liqwalasela ukuqeshwa kwale veki njengesibophelelo. Kwiimeko ezininzi, njengoko kwimeko yokugula, isidlo seNkosi sithathwa kubo abo banqandekile ukuya ekukholweni.
Njengomphumo wesikhalazo esicacileyo secawa - ukubuyela kwiTestamente eNtsha yeTrust kunye nokusebenza - ukucula ingoma ye-acappella ngumculo kuphela osetshenziswe kunqulo. Le ngoma, engahambelani neempahla zomculo, iyahambelana nomculo osetyenziswa kwicawa yabapostile kunye neenkulungwane eziliqela emva koko (Efese 5: 19). Kucinga ukuba akukho mandla okubandakanya kwizenzo zonqulo ezingafumaneki kwiTestamente Elisha. Lo mgaqo uphelela ukusetyenziswa komculo weengoma, kunye nokusetyenziswa kwamakhandlela, isiqhumiso kunye nezinye izinto ezifanayo.
Ewe. Ingxelo kaKristu kuMateyu 25, nakwezinye iindawo, ithathwa ngokubaluleka komntu. Kukholelwa ukuba emva kokufa umntu ngamnye kufuneka eze phambi kukaThixo emgwebeni kwaye uya kugwetywa ngokwezenzo ezenziwa ngexesha wayephila (Hebhere 9: 27). Emva kokuba isigwebo sichazwe uya kuchitha ngonaphakade okanye ezulwini okanye esihogweni.
Cha. Ukungabikho kweso nasiphi na isibhalo kwiindawo zesikhashana sokuhlwayelwa apho umphefumlo ekugqibeleni ukukhishwa ezulwini kuyavimbela ukwamkelwa kwemfundiso yeconceratory.
Ngolunye usuku lokuqala lweveki amalungu ecawa "alala ngocingo njengoko aphumelele" (1 Corinthians 16: 2). Isixa siphi na isipho ngasinye siyaziwa kuphela kumntu owasinika kunye neNkosi. Oku kunika umrhumo wonikezelo-mahhala yilelo kuphela inxeba eyenziwa yicawa. AKUBA uvavanyo okanye ezinye iirhafu ezenziwe. Akukho imisebenzi yokwenza imali, njengempahla yokuthengisa okanye iidlo, ezibandakanyekayo. Inani elimalunga ukuba i-$ 200,000,000 enikezelwayo kulo nyaka ngamnye.